News Collection: फेरि धकधक ?
फेरि धकधक ?
मुम्बई , चैत्र १३ - यति बेला बलिउडमा स्टोरी टे्रन्ड बदलिँदै छ । नायकको अघिपछि नाच्दै हिँड्ने नायिकाहरू पछिल्लो समय दरिला हुँदै गएका छन् । महिला पात्रलाई मुख्य बनाएर पनि फिल्म सफल हुन सक्छ भन्ने उदाहरण 'द डर्टी पिक्चर', 'कहानी' ले दिए ।
विद्या बालनले आफ्ना समकक्षी नायिकालाई समेत पाठ सिकाइदिइन्, ग्ल्यामरले नायिका त बनिन्छ तर सफल अभिनेत्री बन्न दमदार अभिनय पनि चाहिन्छ ।
सन् २००७ मा 'आजा नचले' भने पनि कसैलाई नचाउन नसकेपछि फिल्मबाट ओझेल परेकी माधुरी दीक्षितले पनि अब नारीप्रधान फिल्ममा खेल्न चासो देखाएकी छन् । कुनै समय आफूलाई आदर्श मान्ने विद्याकै कलाकारिताले माधुरीलाई पनि गम्भीर भूमिकामा देखिन मन लागेको हो । पाँच वर्षपछि माधुरी 'डेढ इस्किया' बाट पुनः अभिनयमा फर्किएकी छन् । विशाल भारद्वाजको उक्त फिल्म 'इस्किया' को रिमेक बताइएको छ । लामो समय उपयुक्त स्क्रिप्टको पर्खाइमा रहेकी माधुरीले बीचमा आमा वा सासु, दिदी जस्ता भूमिकाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । 'फ्रिकी फ्राइडे' मा सोनाम कपुरकी आमा हुन इन्कार गरेकी थिइन् । उमेरले ४४ पुगे पनि अझै चल्तीका नायिकाभन्दा कम छैनन् ।
त्यसको गतिलो प्रमाण 'डेढ इस्किया' लाई पनि लिन सकिन्छ । यसमा उनले पाँच करोड भारु पाएको चर्चा छ । यो करिना कपुर, कटि्रना कैफ वा विद्याले पाउँदै आएको भन्दा पनि बढी हो । हुन पनि माधुरी २३ वर्षे करिअरमा उत्कृष्ट अभिनेत्रीका चार र सह- अभिनेत्रीको एउटा फिल्म फेयर अवार्ड जितिसकेकी छन् ।
कुनै बेला 'धकधक करने लगा...' जस्ता गीतमा कामुक नाचबाट दर्शकहरूलाई उफार्न सफल माधुरीले यो उमेरमा कत्तिको उन्माद फैलाउने हुन्, समयले बताउला ।